I-Luxury BR kwiinduli ♥ w/ Netflix, B 'Fast - I-Airbnb
I-Luxury BR kwiinduli ♥ w/ Netflix, B 'Fast
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguRaghav
"I-Oak Suite"-igumbi lokulala eline-ensuite elinendawo yomlilo, iindawo zokuhlala ezipholileyo ezijonge kwigadi entle engasemva yevilla. Lala ebhedini ubukele ilanga liphuma- le yindawo yosapho eyonwabileyo kunye negumbi endilithandayo "kwi-Deodars"
Ukubaleka kwethu ehlotyeni iminyaka engama-30+; Sisanda kuguqula i-villa ibe yindawo entle yokuhlala, ikhaya elikude nekhaya, ukwenzela wena. Yiphathe njengendawo yokulala apho unokuchitha khona iintsuku ezimbalwa uthoba uxinzelelo kwaye ube mnandi ngoku kufihlwa okungaqhelekanga.
“IiDeodars” zisasazeke ngaphezulu kweehektare ezi-2 zezindlu zomhlaba, amagumbi okulala amabini aphindwe kabini, amagumbi okuhlambela abucala, indawo yokufunda, indawo yokuhlala, indawo yokutyela, indawo zomlilo ezi-4, ikhitshi encanyathiselweyo kunye nepatio yangaphandle / iveranda kunye neegadi ukonwabela umbono wepanorama. Uluhlu lweHimalaya.
Vuyisa iqela lakho olithandayo, uzinkcenkceshe kwiNetflix kwaye wonwabele ilayibrari yethu egcwele ngokupheleleyo kunye nemidlalo yebhodi kunye neeseshini zeFrisbee.
Ngaphandle kwe-ajenda yokulandela - yiza ukhulule esixekweni kwaye ube nobudlelwane nendalo
I-villa ibekwe kwi-cantonment yelifa le-Ranikhet "i-Queens Land" ewela kwingingqi ye-Kumaon yase-Uttarakhand, e-Indiya. Kufuphi nendlela ye-Mall, kwaye kude nesiphithiphithi sesixeko - "i-Deodars" isentshona. intlambo yeRanikhet-ijikelezwe ngamahlathi epine kunye nefir; ilungele ukuchitha ixesha elisemgangathweni kwindalo yendalo.
I-Ranikhet sisikhululo senduli esibukekayo nesingekajongwa, malunga ne-6000ft ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye malunga ne-59km kude neNainital. Imozulu yalapha yiAlpine - ihlobo lipholile kwaye ubusika bubanda.
Relax, Funda, Bhala kwaye wonwabe iNdalo ngelixa uhamba uhambo olude kwiindlela ezininzi zokuhamba ngaphakathi nakwi-villa. Iimbono ezintle, ikofu elungileyo kunye nokutya okuphekwe ekhaya - iRanikhet iya kukukhuthaza ukuba uxabise izinto ezincinci ebomini kunye nobuhle bokwamkela indalo kulo lonke uzuko lwayo.
I-Ranikhet ineetempile ezininzi zamandulo (iTempile ye-Jhula Devi yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka endlwini), ii-apula zeziqhamo kunye ne-9 hole Golf Course (evulekele uluntu) zonke zivale i-villa.
Ihotele yaseWest View emalunga nokuhamba kwemizuzu emi-5 ukusuka kwilali nayo inezona ndawo zintle zokutyela eRanikhet - I-Oak Garden Cafe yangaphandle, ivenkile yekofu kunye neGumbi lokutyela.
Ukuba siyipropathi, ndiyinto nje yokunkqonkqoza kwaye ndingathanda ukutshintshiselana ngamabali.
Okanye, umphathi wendlu yethu kunye nabasebenzi baya kuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kukhululekile kwaye kuyanelisa